स्वास्थ्य पेजमानिसको ओठ किन रातो हुन्छ ? - स्वास्थ्य पेज मानिसको ओठ किन रातो हुन्छ ? - स्वास्थ्य पेज
तपाईंको ओठ रातो वा त्यससँग मिल्दोजुल्दो रङको किन हुन्छ भन्नेबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? हामी हरेक दिन ओठको उपयोग गर्छौँ । भिन्न भिन्न कामका लागि । यो यति नाजुक किन हुन्छ रु यो किन सुक्न थाल्छन् ? यो किन फुट्छन् ? मानिसको विकास त्यसरी किन भयो कि उनीहरुको ओठ बने जबकी पंक्षी, कछुवालगायतका जीव–जन्तुको किन बनेनन् ?
ओठको छाला हल्का हुन्छ त्यसैले त्यसको पिगमेन्टेशन बढी देखिन्छ । त्यो रातो रङको देखिन्छ । यसको एउटा ठूलो कारण के पनि हो भने हल्का छालाको पछाडि लाखौँ रगतका नली हुन्छन् जुन रातो रङको हुन्छ । त्यसले पनि ओठलाई रातो देखाउँछ । ओठ र अनुहारका अन्य अंगबीच केही भिन्नता भएको क्यामरन औँल्याउँछन् ।
२७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार प्रकाशित